Diode လေဆာစီးရီးထုတ်လုပ်သူများ |China Diode Laser Series ပေးသွင်းသူများ & စက်ရုံ
Diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေး Nd Yag Ipl Ipl လေဆာစက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဗေဒပစ္စည်း Diode လေဆာ OPT/IPL Nd Yag လေဆာစက်
စက်ရုံစျေးနှုန်း လက်ကားအသစ် Diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေး ND YAG Q-SWITCH လေဆာ 1064nm 532nm 755nm တက်တူးဖယ်ရှားရေးစက်
ဤသည်မှာ Big spot high power diode လေဆာ + Nd Yag Laser2in 1 စက်ဖြစ်သည်။
လက်ကိုင်နှစ်ခု- ဒုတိယမျိုးဆက် diode လေဆာလက်ကိုင်နှင့် Nd Yag လေဆာလက်ကိုင်
လုပ်ဆောင်ချက်များ- Diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း + Nd yag လေဆာတက်တူးဖယ်ရှားခြင်း + အရောင်ခြယ်ခြင်းကုသခြင်း + ကာဗွန်အခွံခွာခြင်း။
အမှီအခိုကင်းစွာ အလုပ်လုပ်သော စနစ်နှစ်ခု
အရောင်းရဆုံး 808nm Diode Laser IPL SHR SSR E-light Beauty Equipment Pain Free Permanent Laser Hair Removal Machine for Clinic
diode လေဆာ + IPL ဘက်စုံသုံး အလှပြင်စက်
စက် ၁ လုံးဖြင့်၊ ၎င်းသည် အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို အကျုံးဝင်သည်-
1. Diode လေဆာဖြင့် အမြဲတမ်းဆံပင်ကို ဖယ်ရှားခြင်း။
2. Diode လေဆာဖြင့် အရေပြားပြန်လည်နုပျိုခြင်း။
3. IPL ဖြင့် လိမ်းပါ။
4. IPL ဖြင့် အရေပြားပြန်လည်နုပျိုခြင်း။
5. အရေပြားဖြူဝင်းစေခြင်း၊ ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းကုသခြင်း၊ IPL ဖြင့် ပင့်ကူသွေးပြန်ကြောကုသမှု
6. IPL ကုသမှုဖြင့် ဆံပင်ကို ဖယ်ရှားခြင်း။
Diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းအပြင် 980nm လေဆာဖြင့် အရေပြားပြန်လည်နုပျိုခြင်း IPL SHR OPT လေဆာ
စက် ၁ ခု၊ လက်ကိုင် ၃ ခု၊ လုပ်ဆောင်ချက် ၁၀+ ခု။- လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း - ဝက်ခြံကုသခြင်း - ဓာတ်ပုံပြန်လည်နုပျိုခြင်း - အသားအရေဖြူစင်ခြင်း - ပင့်ကူသွေးပြန်ကြောကုသမှု - အရောင်ခြယ်ခြင်းကုသမှု - တက်တူးဖယ်ရှားခြင်း - ကာဗွန်အခွံခွာခြင်း - အရေးအကြောင်းဖယ်ရှားခြင်း - ခန္ဓာကိုယ်ရုတ်သိမ်းခြင်း - သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ
ဘက်စုံသုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် diode လေဆာအမွှေးဖယ်ရှားရေး elight အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုအလှပြင်ဆိုင်ကိုအသုံးပြုပါ။
၎င်းသည် ကြီးမားသော အစက်အပြောက် diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း+ IPL2in 1 စက်ဖြစ်သည်။
၎င်းတွင် စက် ၁ ခုတွင် လက်ကိုင်နှစ်ခုရှိပြီး သီးခြားလုပ်ဆောင်သည့် စနစ်နှစ်ခုရှိသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များ- ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း၊ အသားအရေဖြူဝင်းခြင်း၊ ဓာတ်ပုံပြန်လည်နုပျိုခြင်း၊ ဝက်ခြံကုသခြင်းနှင့် SHR စူပါဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း။
2021 ခေတ်အစားဆုံး အလှပြင်ဆိုင် ကိရိယာ diode လေဆာ 755 808 1064nm ပေါင်း IPL shr elight လေဆာ diode ဘက်စုံသုံး စက်
၎င်းသည် Big Spot diode လေဆာ + IPL2in 1 စက်ဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်လက်ကိုင်နှစ်ခုပါရှိသည်- 2nd မျိုးဆက် diode လေဆာလက်ကိုင် + IPL လက်ကိုင်
လုပ်ဆောင်ချက်များ- diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း၊ IPL ဓာတ်ပုံပြန်လည်နုပျိုခြင်း၊ IPL အသားအရေဖြူစင်ခြင်း၊ IPL ဝက်ခြံကုသခြင်းနှင့် IPL SHR စူပါဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း။
အမှီအခိုကင်းစွာ အလုပ်လုပ်သောစနစ် ၂။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် diode လေဆာနှင့် ndyag လေဆာ2in 1 ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း နာကျင်မှုမရှိ တက်တူးဖယ်ရှားခြင်း ကာဗွန်တက်တူး
1. Diode လေဆာဖြင့် အမြဲတမ်းဆံပင်ကို ဖယ်ရှားခြင်း 2. Diode လေဆာဖြင့် အရေပြားပြန်လည်နုပျိုခြင်း 3. အရောင်အားလုံး တက်တူးနှင့် အရောင်ခြယ်ခြင်း ဖယ်ရှားခြင်း 4. မှဲ့များကို ဖယ်ရှားခြင်း 5. Carbon peeling ကုသမှု
Diode လေဆာသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်အကွာအဝေးအတွင်း မြင်နိုင်သော အလင်းတန်းများကို ပေါင်းစပ်ထုတ်လွှတ်သည့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာနည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။၎င်းသည် အရေပြားအတွင်းရှိ သီးခြား chromophores ကို ပစ်မှတ်ထားရန် ကျဉ်းမြောင်းသော ရောင်စဉ်ပါရှိသော အလင်းတန်းကို အသုံးပြုသည်။Ruby နှင့် Alexandrite ကဲ့သို့သော အခြားသော လေဆာစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 800nm ​​diode လေဆာလှိုင်းအလျားသည် အနက်ရှိုင်းဆုံး ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုအဆင့်နှင့် မီလနင်စုပ်ယူမှု သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ဤထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများသည် diode လေဆာအား လေဆာအမွှေးအမျှင်များဖယ်ရှားခြင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးနည်းပညာဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်နေရာအားလုံးရှိ အရေပြားနှင့် ဆံပင်အမျိုးအစားအားလုံးကို ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်စွာ ကုသနိုင်စေပါသည်။
diode လေဆာ3လှိုင်း 755 808 1064nm ပေါင်း ndyag လေဆာစက် ဒိုင်အိုဒိတ်လေဆာ ပေါင်းစပ်လေဆာ
2021 ဒီဇိုင်းအသစ် diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းနာကျင်မှုမရှိသောအပေါင်း ndyag လေဆာတက်တူးဖယ်ရှားခြင်းလေဆာပေါင်းများစွာ
Diode လေဆာသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်အကွာအဝေးအတွင်း မြင်နိုင်သော အလင်းတန်းများကို ပေါင်းစပ်ထုတ်လွှတ်သည့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာနည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။၎င်းသည် အရေပြားအတွင်းရှိ သီးခြား chromophores ကို ပစ်မှတ်ထားရန် ကျဉ်းမြောင်းသော ရောင်စဉ်ပါရှိသော အလင်းတန်းကို အသုံးပြုသည်။Ruby နှင့် Alexandrite ကဲ့သို့သော အခြားသော လေဆာစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 800nm ​​diode လေဆာလှိုင်းအလျားသည် အနက်ရှိုင်းဆုံး ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုအဆင့်နှင့် မီလနင်စုပ်ယူမှု သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။